1। SR9009 (स्टिनाबालिक) के हो?
3। SR9009 प्रभावहरू
4। सिफारिस गरिएको डोजज
5। SR9009 बाट यो परिणाम कति लिन्छ?
6। सम्भावित जोखिमहरू
7। वास्तविक प्रयोगकर्ता अनुभव
8। वास्तविक SR9009 बल्क अनलाइन पाउनुहोस्
SARM SR9009 वरिपरि प्रचार टाइप गरिसकेपछि, तपाई शायद सोच्दै हुनुहुन्छ; के यो मेरो लागि सही दबाइ हो? खैर, यो तपाईलाई आवश्यक हुन सक्दछ - तपाईले तपाइँको क्यालोरीहरू हेर्दै गरेको छ, तपाईंको जीवन जस्तै मन पराउँछु, र मोटो बर्नरहरुमा एक सुन्दर पैसा खर्च गरेको छ। अब तपाईं आफैलाई आईने मा हेर्दै हुनुहुन्छ र सहयोग गर्न सक्नुहुन्न तर आश्चर्य - किन यो सबै काम थिएन?
यदि तपाईं सोचिरहेको छ कि यो बोसो जलाउन र दुबला मांसपेशिहरु निर्माण गर्न के हो, तपाईलाई तपाइँको कसरत रिम्यानमा SR9009 समावेश गर्न आवश्यक छ। अझ धेरै रोमाञ्चक खबरहरू यो कि SARM प्रयोग गरी SR9009 प्रयोग गरेर स्टेरियोडहरूको तुलनामा स्तरमा दुबला बोसो र दुबला मांसपेशी बनाउनेछ, तर बिना लुगाको शरीर-कपाल बढ्दै, बल-हल्लाउँदै, र लिभर-नष्ट पार्ने असर।
वास्तवमा SARM हरू हुनुहुन्छ? चुनिंदा एण्ड्रोजन रिसेप्टर मोड्युलेटरहरू (SARMs) एक उत्कृष्ट नयाँ औषधि प्रदर्शनका लागी औषधि हुन् जसले मोटो हानि बढाउँदछ र मांसपेशी विकास बढाउँछ। तिनीहरूको प्रभावशीलता स्टेरियोड्स भन्दा सानो हुन सक्छ, तर यसको अर्थ पनि उनीहरूको साइड इफेक्ट कम गम्भीर छ। तपाईंको शरीरमा कसरी सिन्फिफ्रेन्स एचसीएल काम गर्दछ?
SARM SR9009 एक छ शीर्ष SARM पूरक बजारमा आज यदि तपाईं यस औषधिसँग परिचित हुनुहुन्न भने, यो राम्रो छ कि तपाईं यसलाई प्रयास गर्नु अघि यो जान्नुहोस्। यहाँ हाम्रो विस्तृत SR9009 समीक्षा हो जुन यस औषधिको बारेमा सबै महत्वपूर्ण पहलुहरु लाई तपाइँलाई थाहा छ, यो के छ, यसले कसरी काम गर्छ, यो SR9009 खुट्टा, SR9009 प्रभाव / फाइदाहरू, र अन्य धेरै सिफारिश गरेको छ।
1. SR9009 (स्टिनाबालिक) के हो?
जबकि यो SARM को रूपमा व्यापक रूपमा मार्केट गरिन्छ, SR9009 (सीएएस नम्बर 1379686-30-2) अनिवार्य रूप देखि एक Rev-erb-एक आणविक औषधि हो। के यो सरल अर्थ भनेको SR9009 एक यौगिक हो जसले आफैलाई रिआर-र्ब-प्रोटीन अणुलाई बाँध्छ र न केवल सक्रिय गर्दछ, तर यो यसको प्रभाव अझ बढाउँछ, मानव शरीरमा कार्यहरूको श्रृंखला बन्द गर्दछ।
तर Rev-erb-a के हो? तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ। Rev-erb-a एक प्राकृतिक आणविक ढाँचा हो जुन जिगरमा चर्को र ग्लुकोजको चयापचय नियन्त्रण गर्दछ, र चक्रहरू मर्नु पर्ने कोशिकाहरू। यो पनि mitochondrial सामाग्री र ओक्सीकरण समारोह को प्रमुख भौतिक नियामक हो।
यसैले, SR9009 जस्ता औषधीय औषधिहरु मार्फत रिव-erb-ए को सक्रियता समझौता व्यायाम क्षमता र कंकाल मांसपेशिहरु को प्रबंधन को लागि एक आशाजनक दृष्टिकोण हो। यो यस कारण हो कि एसआरएक्सएनमएक्स वा स्टेनबोलिक बडी बहाली समुदाय संग यसको लोकप्रियता हो जुन यसको बोसो जलन र सहनशीलता को बढावा दिन को कारण हो।
SR9009 को प्रोफेसर थॉमस बूरिस द्वारा स्क्रीप्प अनुसन्धान संस्थान मा विकसित गरिएको थियो। परिसर को शुरुआती नैदानिक ​​परीक्षणहरुमा चूहों मा परीक्षण गरियो। The SR9009 अघि र पछि नतिजाले कडा व्यायाम समावेश नगरी चयापचय दर र सहनशीलतामा ठूलो वृद्धि देखाएको छ। विशेष गरी, मांसपेशिहरु माइकोमोन्ड्रियामा वृद्धि, ओक्सीजन को खपत मा वृद्धि, लिभर मा नयाँ नयाँ वोसो कोशिकाहरु र वोसो भंडारण कम भयो सबै दस्तावेजहरु थिए। यसको अतिरिक्त, परीक्षण चूहों थियो उनको कोलेस्ट्रॉल स्तर2हप्ता भन्दा कम मा गिरावट थियो।
यद्यपि SARM SR9009 कहिलेकाहीँ खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित भएको थिएन, जसले एसओएक्सएक्सएनएमएक्समा आफ्नो हात पाउने एथलीट, शरीरबहिनी र नियमित व्यायामक जिमहरू रोक्न सकेन र उनीहरूको साथीहरूको विरुद्धको माथिल्लो हातमा मद्दत गर्न।
पहिलेको उल्लेख जस्तै, तपाईंको शरीरमा Rev-erb भनिने केहि चीज छ जुन तपाईंको शरीरमा वोसो र ग्लुकोजको चयापचय नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार छ, साथसाथै कोशिकाहरू मर्नु र स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्थापित गर्न। यसैले, यसले विभिन्न उत्पादनहरूलाई असर गर्छ जुन ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित हुन्छ।
जब तपाईंको शरीरमा REV-ERB कम हुन्छ, तपाईं मेटाबालिक र कार्डियो / मांसपेशी क्रियाकलापको समस्यामा अधिक सम्भावना हुनसक्दछ। SR9009 ठूलो मद्दत हुन सक्छ। जब तपाईं SR9009 लिनुहुन्छ, केहि चीजहरू हुन्छ:
लिभर: REV-ERB इन्सुलिन संवेदनशीलता परिवर्तन बिना ग्लुकोज उत्पन्न जेनहरू बन्द गर्दछ। यसले जीनहरूलाई नयाँ मोटो कोशिकाहरू पनि उत्पादन गर्दछ र म्याक्रोफेज उत्पादनमा प्रभाव पारेको भ्रामक प्रतिक्रिया घटाउँछ।
मांसपेशीमा: REV-ERB नयाँ म्युकोमोन्ड्रियाको उत्पादन बढायो, म्युकोन्डोडियाको गतिविधि बढ्छ, र पुरानो मियोकोन्ड्रियाको विनाश कम गर्दछ।
फैट सेलहरू: REV-ERB ट्राइग्लिसराइड्स को उत्पादन घटाउँदछ र जीन जो फ्याँस भण्डारण गर्नको लागी जिम्मेवार हुन्छ।
अध्ययनले थाहा पाउँछ कि 47 प्रतिशतले कोलेस्ट्रॉललाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, 12 प्रतिशत प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स, 23 प्रतिशत द्वारा प्लाज्मा गैर-अनुमानित फैटी एसिड, 19 प्रतिशत द्वारा प्लाज्मा ग्लूकोज र 35 प्रतिशतद्वारा प्लाज्मा इन्सुलिन स्तरमा प्लाज्मा। अर्को शब्दमा, SR9009 ले कोलोस्ट्रोल र मोटो शरीरमा भण्डार गरिएको मात्रा कम गर्छ, र मांसपेशिहरु मा भण्डारण गरिएको ग्लुकोज र चिसो बन्द गर्दछ।
3. SR9009 प्रभावहरू
यद्यपि SARM SR9009 ले भारोत्तोष, शरीरशैली र एथलीटहरूको लागि सिर्जना गरिएको थियो, यो औषधि समग्र स्वास्थ्य र जीवनको गुणस्तर बढाउने देखाइएको छ जुन यसलाई प्रयोग गर्दछ। प्राप्त गर्न विभिन्न लक्ष्यों संग मान्छे को केहि केहि वर्ष को लागि stenabolic को उपयोग गरेर रहेको छ र उनलाई एक राम्रो संख्या अविश्वसनीय रिपोर्ट को छ SR9009 फाइदाहरूसहित:
जिन्दगीमा हिँड्ने मानिसहरूको 99 प्रतिशतको बारेमा वा सख्त आहार सुरु गर्नुहोस् शरीरमा मोटाइ हटाउनको लागि। यदि तपाईं मोटाइ वा अधिक वजन हुनुहुन्छ र तपाईंले सफलता बिना बोसो बर्नरहरू खोज्नुभयो भने तपाईले SR9009 लिनु पर्छ। यो औषधिले तीन तरिकामा वजन घटाने सुविधा दिन्छ, जसमा:
यसले ग्लुकोजको चयापचय बढाउँछ: एसआरएक्सएनएनमक्सले लिभरमा ग्लुकोजको चयापचयलाई असर गर्छ। यो परिणाम अधिक ग्लुकोज मा राखिएको बोसो माटो को रूपमा भण्डारण गर्नुको साथै कंकाल मांसपेशीमा लिइन्छ।
यसले क्यालोरीको चयापचय बढाउँछ: SR9009 क्यालोरीहरूको कुशल चयापचय सक्षम पार्छ जुन तपाईंको शरीरमार्फत शरीरमा प्रवेश गर्दछ। यसले मात्र यो सुनिश्चित गर्दैन कि तपाईंको शरीरमा कुनै बोसो भण्डारण छैन, तर यो पनि तपाईंको शरीरमा पहिले नै भण्डार गरिएको मोटो को मात्रा कम गर्न मद्दत गर्दछ।
यसले बेसल चयापचय दर बढाउँछ: SR9009 ले तपाईंको शरीरलाई प्रतिक्रिया गर्न सक्ने क्षमता छ भने यो अस्थायी चयापचय दर बढाएर निरन्तर अभ्यासको स्थितिमा छ। यहां सम्म कि कुनै पनि व्यायाम मा संलग्न बिना, तपाईं चयापचय उच्च जब सम्म तपाईं SR9009 प्रयोग गरिरहनु भएको छ।
राम्रो कुरा बारे SR9009 वसा हानि हो कि पूरक न केवल तपाईं प्रभावी ढंग देखि वजन कम गर्न मा मदद गर्दछ यदि तपाईं मोटाइ वा अधिक वजन छ, तर यसले तपाईंलाई एक आदर्श शरीर को वजन को बनाए राखन को लागि पनि मदद गर्दछ। के यो बजारमा सबैभन्दा मोटो बर्नरको विपरीत हो भने, SR9009 ले तपाईंको चयापचय उच्च उच्च राख्नु आवश्यक छ बिना तपाईंको केन्द्रीय तंत्रिका तवरलाई असर पार्नेछ।
SR9009, जुन "बोतलमा व्यायाम" को रूप मा उल्लेख गरिएको छ, यो पनि अत्यन्त उपयोगी हुन्छ जब यसले सहनशीलता बढाउन आउँछ। यस औषधीको बारेमा राम्रो कुरा भनेको हो कि तपाईको सहनशीलतालाई निरन्तरता दिइनेछ कि तपाई एक एथलीट हुनुहुन्छ जुन नियमित रूपमा व्यायाम गर्दछ वा तपाईं नियमित "जो" हुनुहुन्छ जुन अक्सर व्यायाम गर्दैन। Stenabolic लिनु, तपाईं धेरै सजिलै संग कुनै पनि व्यायाम प्रदर्शन गर्न र उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ।
एक पल्ट स्टिनाबलिक तपाईंको प्रणालीमा हुन्छ, तपाईं एक हुनुहुनेछ SR9009 बढाइएको एथलीट। यो मात्र मतलब छ कि तपाईंसँग अर्थमा अधिक व्यायाम क्षमता हुनेछ जुन तपाईंसँग काम गरिरहनु अघि तपाईंको शरीरलाई बलियो रूपमा धक्का पार्न आवश्यक छैन। अधिक भनेको के तपाईं उच्च तीव्रता workouts मा संलग्न हुँदा पनि तपाईंको गति छिटो हुने छैन। यसको मतलब तपाईं यति छिटो निस्कनु बिना लामो समयसम्म छिटो वा व्यायाम स्प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
अधिकांश पुरुषहरू ठूलो मांसपेशिहरु मन पराउँछन्। उनीहरूले वर्षौं डुबबेल लिने बित्तिकै आफ्नो मांसपेशिहरु र चिसो बढाउने हरेक दिन सयौं स्क्वाट्सहरू गर्छन्। यदि तपाईं कडा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंले प्रतियोगिताको जित्ने किसिमको प्रकार हासिल गर्नुभएन भने तपाईले SR9009 प्रयोग गर्नु पर्छ।
SR9009 ले दुबला मांसपेशिहरु मा वृद्धि को बढाया छ। SR9009 मांसपेशी लाभ एक लाभ हो जुन माथि सहनशीलताको फाइदाको परिणामको रूपमा आउँछ। पूरक रूपमा तपाईले सहनशीलता दिनुहुन्छ, तपाई तीव्र कार्यस्थल सहन सक्ने क्षमता प्राप्त गर्नुहुनेछ। मांसपेशी हाइपरट्रोफी workouts को समयमा बलियो र प्रगति को एक उत्पाद को रूप मा आउँछ। जब तपाईं आफ्नो workouts को समयमा प्रगति गर्छन, तपाईं मांसपेशियों को लाभ को अपेक्षा गर्न सक्छन् किनभने मांसपेशियों को संख्या बल र बल धीरज को पालन गर्दछ।
यदि तपाइँ शक्ति पावर हुनुहुन्छ भने सतावटमा छ, तपाईले SR9009 किन्न आवश्यक छ। एकपटक तपाईं यो औषधि लिनु भएपछि, तपाईं एकदम फरक फरक पार्नुहुन्छ। यो किनभने एसआरएक्सएनमक्सले मिन्टोमोन्ड्रियाको पहेलो उन्मूलनलाई अझ बढावा दिन्छ र नयाँ उत्पादनको उत्प्रेरित गर्दछ। यसले अत्यन्तै कठोर कार्यआवास पछि दुखाइलाई घटाउँछ।
उपरोक्त SR9009 फाइदाहरूको अलावा, यो औषधि पनि विभिन्न चिकित्सा अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसमा:
मोटापाको उपचार: यो पूरक मोटापे को उपचार को लागि प्रयोग गरिन सक्छ, विशेष गरी उन मामलाहरु को लागि जहां व्यायाम र आहार को प्रभावकारी साबित भएको छैन।
टाइप II मधुमेहको लागि उपचार: स्टिनाबालिकको ट्राइग्लिसराइड्स र प्लाज्मा ग्लूकोज कम गर्ने क्षमता पनि SARM SR9009 लाई टाइप II मधुमेह नियन्त्रण गर्न राम्रो पूरक बनाउँछ।
सरकोपिनियाको उपचार: पूरक सर्पपिनिया को उपचार मा प्रभावकारी हुन को लागी पनि पाया गएको छ, एक शर्त जो मांसपेशियों मा शक्ति को कमी को जिम्मेदार छ सामान्य रूप मा उमेर मा एक प्रगति को रूप मा अनुभव को रूप मा अनुभव।
कोलेस्ट्रॉल सम्बन्धी अवस्थाहरूका लागि उपचार: तथ्य यो हो कि SR9009 ले शरीरमा कोलेस्ट्रोललाई कम से कम गर्ने क्षमता हो भन्ने अर्थ छ कि औषधिले रोकिएको वा भित्री धमनी, हृदयघात, र हृदय विफलताको संभावना कम गर्न मद्दत गर्दछ।
4. सिफारिस गरिएको डोजज
SR9009 30ml र 60ml बोतलमा निहित तरल निलम्बनको रूपमा आउँछ। औसत SR9009 खुट्टा पुरुष र महिला दुवै को लागी 30 मिलीग्राम हो। तथापि, आदर्श खुट्टा एक प्रयोगकर्ताबाट अर्कोमा भिन्न हुनेछ, आधारमा प्राप्त गर्न चाहन्छ। मेलनोटन-II / MT6 मा2कुञ्जी बिन्दु जुन तपाईंलाई थाहा छ
उदाहरणका लागि; यो सौन्दर्य बहालीका लागि सिफारिस गरिएको छ, भारोत्तोलन र एथलीटहरू प्रशिक्षण दिन अघि दुई घण्टाअघि 30 एमजी खुट्टा लिन स्टेमना र सहनशीलता बढाउन खोज्दै। चयापचय र ऊर्जा बढाउन खोज्नेहरूका लागि, यो 30 मिलीग्राम बराबरको खुट्टामा विभाजित गर्न सिफारिस गरिन्छ, चलो5मिलीग्राम, प्रति दिन छ पटक लिन। यसले औषधिको प्रकार्यलाई संतुलन गर्न मद्दत गर्न सक्छ। सबैभन्दा उत्तम SR9009 खुराक निर्धारण गर्न अन्य निर्णायक कारकहरू शरीरको वजन, शरीरको सहनशीलता क्षमता, व्यक्तिगतको मेडिकल ईतिहास, र लागू औषधको प्रति व्यक्ति हुन्।
ध्यान दिनुहोस् कि SR9009 एक मौलिक सक्रिय यौगिक हो। यसैले, SR9009 लिनको लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका यसलाई तपाइँको मुखको पछाडि तिरस्कार गर्दछ। यो तपाईंको गलामा 10 सेकेन्ड पछि अवशोषित गरिनेछ, पछि तपाईले केहि रस निगल गर्न सक्नुहुन्छ, पानी वा प्रोटीन हिला। यसले भयानक स्वाद फैलाउन मद्दत गर्नेछ।
तपाईलाई पनि ध्यान दिनुहोस् कि SR9009 आधा जीवन केवल4घण्टाको बारेमा मात्र हो। औषधीले दुई घण्टा भित्र सक्रिय जीवनको तीव्र वृद्धि गरेको छ, र त्यसपछि यो छिट्टै प्रणाली छोड्छ। यसैले, यो SR9009 पूर्व-व्यायाम लिने सल्लाहकार छ। उदाहरणका लागि; यदि तपाइँ सामान्यतया तपाईंको बिहान बिहान कार्डियो 10 मा: 00 AM, यो सिफारिस गरिएको छ कि तपाईं 9009 मा तपाईंको SR8 खुराक लिनुहोस्: 00 AM यदि तपाईं कुनै विशेष दिन कुनै पनि व्यायाम गर्न चाहानुहुन्छ भने, केवल लागू औषधि नदिनुहोस्।
टिप्पणी गर्न अर्को कुरा यो छ कि SR9009 ले न केवल एकल एकल औषधिको रूपमा काम गर्दछ, तर स्ट्याकमा पनि। Stenabolic संग एक लोकप्रिय एएएस काटने स्टक 350 मिलीग्राम / सप्ताह मा टेस्ट ई, 400 मिलीग्राम / सप्ताह मा Primobolan र प्रति दिन SR20 को 9009 मिलीग्राम छ। अन्य SARMs जसले SR9009 सँग संयोजनमा राम्रो काम गर्दछ कार्डरिन र लिगाण्डोल समावेश गर्दछ।
5. SR9009 बाट यो परिणाम कति लिन्छ?
माथिको SR9009 फाइदाहरूको अलावा, यस औषधिको बारेमा अर्को ठूलो कुरा यो हो कि यो धेरै अन्य SARMs को तुलनामा छिटो परिणामहरू उत्पन्न गर्दछ। एकपटक तपाईं SR9009 लिनुहोस्, तपाईं सात दिन भित्र परिणामहरू सूचना गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, नतिजाहरु SR9009 खुराक लिईएको रकमको आधारमा एक व्यक्तिबाट अर्को फरक पर्दछ।
अन्य औषधीहरू जस्तै जस्तै, यो SR9009 लाई सूचित रूपमा लिने सबै भन्दा राम्रो हो। यदि तपाईं कम खुराक गर्नुहुन्छ भने, तपाईं इष्टतम परिणामहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। औसत खुराक भन्दा बढि अत्यधिक निराश छ। यद्यपि ओभरडाइजको लागि SR9009 साइड इफेक्ट कुनै पनि मेडिकल अध्ययनले फेला पारेको छैन, यो दैनिक समयावधि भन्दा टाढाको सुरक्षित रूपमा मान्न सकिदैन।
6. सम्भावित जोखिमहरू
भारोत्तोष, शरीरशैली र जिम उत्साही लगातार आदर्श वजन को बनाए राखन को लागि, दुबला मांसपेशिहरु लाई र उनको प्रदर्शन को बढावा को लागी को लागी लग रहे हो। स्टेरियोड्सले सहनशीलता बढाउन र मांसपेशी विकासको विकासमा प्रभावकारी साबित गर्न सक्दछन्, उनीहरूलाई नियमित आधारमा इन्जेस्ट गर्दा तपाईंको अंगहरू जोखिममा राख्न सक्छ।
तपाईंको परीक्षण सिकन के अलावा, स्टेरियोड्सले तपाईंको हृदयमा अनियमितता उत्पन्न गर्न सक्छ र तपाईंको प्रशोधनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। SR9009 जस्ता SARM हरू जो कि किन चाहानुहुन्छ तर गम्भीर साइड इफेक्ट बिना एक पुन: दुरुपयोग किनकि तिनीहरू प्रयोग गर्न धेरै सुरक्षित छन्।
SARM SR9009 कुनै पनि तरिका मा हार्मोनल, एस्ट्रोजेनिक, या एन्ड्रोजेनिक, र यो पुरुष र महिला दुवै को लागि सुरक्षित छ। अहिले सम्म, त्यहाँ कुनै ज्ञात SR9009 साइड इफेक्टहरू छैनन्। यद्यपि, केही साइड इफेक्टहरूको लागि यो सम्भव छैन। यदि तपाइँ औषधि प्रयोग गर्दा कुनै पनि दुर्गम लक्षणहरू अनुभव गर्दछ भने, यसलाई तुरुन्तै प्रयोग गर्न रोक्नको लागि सल्लाह दिइएको छ र यसको बारेमा तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईंको शरीर SR9009 लाई कसरी प्रतिक्रिया गर्दछ भन्ने पत्ता लगाउन, सानो खुसीको साथ सुरू गर्नुहोस् र यसलाई 20 बाट 30 मिलीग्राममा बिस्तारै बढाउनुहोस्।
7. वास्तविक प्रयोगकर्ता अनुभव
जस्टस रिल: म सर्र्म को एक लामो समय प्रयोगकर्ता हुँ र वर्षहरु मा राम्रो र बोगुआ दुवै उत्पादनहरु लाई किनयो। मैले केही महिना अघि SR9009 / stenabolic को प्रयोग गरी सुरू गरे र मैले उत्कृष्ट नतिजाहरूको बारेमा केहि पनि गरेका छैनन। ड्रग निरन्तर राम्रो भएको छ। मैले अहिले सम्म कुनै शिकायत छैन।
ब्रूस: म सामान्यतया 12 हप्ता चक्रमा जान्छ र SR9009 सँग राम्रो परिणामहरू पाईन्छ। मेरो ढिलो र नियन्त्रण वजन कम भएको छ, र मेरो सहनशीलताको क्षमता बढेको छ। म यो SARM लाई सिफारिस गर्दछु।
मगडेलेन: म जिम उत्साहित हुँ र सतावट स्थिर रहेको थियो। यो Stenabolic प्रयोग गरेर सुरु गरे2हप्ता पछि यो थियो। आजकल, म लामो समय सम्म काम गर्दछु र म अब जिम बाहिर बाहिर लम्पेट छैन। साँच्चै राम्रो सामान! Sarm RAD140 (टेस्टोलोन) प्रयोगकर्ताले भने: समीक्षाहरू, चरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्, जोखिमहरू
पत्रुस: म फिटनेस विशेषज्ञ र एक निजी प्रशिक्षक हुँ र मैले विभिन्न प्रकारका SARM प्रयोग गरेको छु। म केही खराब समीक्षाहरूमा आएको छु, जसको प्रायः प्रयोगकर्ताहरु द्वारा SARMs को प्रकृति बुझ्न को लागी लेखिएका छन्। सबैभन्दा पहिले, SARM चमत्कारिक औषधि होइन। दोस्रो, तिनीहरू स्टेरियोड्स होइनन्, त्यसैले तिनीहरू स्टेरियोड्स जस्तै व्यवहार गर्न अपेक्षा गर्नुपर्दैन। SR9009 को साथ उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त गर्न को लागि, तपाईंको आहार र पोषक तत्व को स्थान मा हुनु पर्छ। Stenabolic वास्तवमा ती SARM हरू जसले वास्तवमा राम्रो काम गर्दछ। राम्रोसँग राम्ररी चिन्नु राम्रो छ।
पावल व्हाइट: मैले मोटो बर्नरहरूसँग कसरी निराश गरिरहेको देखेँ, एक मित्रले मलाई एसआरएक्सएनमक्सक्स कोसिस गर्न सल्लाह दिएका छन् किनभने यसले अर्को आपसी साथीको लागि राम्रो काम गरेको छ। म बिस्तारै शंकास्पद थियो, तर मैले अनुसन्धानको लागी औषधिको बारेमा फेला पार्न र यसले कसरी काम गर्दछ। मैले समीक्षा गरेको सबै समीक्षाहरू भन्छु कि लागूपदार्थ सुरक्षित छ त्यसैले मैले यो प्रयास गरे। यो 9009 महिना भएको कारण मैले यसको प्रयोग गर्न सुरु गरें र म अब लामो व्यायाम गर्न सक्षम छु। मैले अझै सम्म धेरै वजन गुमाएको छैन, तर म हल्का महसुस गर्दछु। लागू औषधि प्रयोग जारी रहनेछ।
मार्टिन: मैले SARM हरू खरीद गर्न विभिन्न साइटहरूमा अनुसन्धान गरिरहेको छु त्यसैले मैले Phcooker लाई जानें। सबै केहि सजिलै उत्कृष्ट ग्राहक सेवा चलाइयो, साथसाथै छिटो र असुविधा वितरणको प्रतिज्ञा गरिएको। के यो अधिक छ कि तिनीहरूको SARM SR9009 काम गर्दछ! म निश्चित रूप देखि उनीहरु को लागि जो उनहरु को वास्तविक SARMs चाहते हो उनलाई अनुशंसा गर्नेछन्।
डोराइन: म अधिक वजन छ। मैले आहार गर्ने प्रयास गरेको छु तर मेरो रौतहटले मलाई मलाई छोड्नेछैन। मैले अभ्यास गर्ने प्रयास गरेको छु तर म मेरो कसरत रिजिमसनमा बाँच्न सक्दिन। मैले सुनेको छ कि त्यहाँ औषधिहरू छन् जसले चयापचय बढाउन सक्छ र तपाईंलाई कडा अभ्यास बिना पनि क्यालोरी जलाउन सक्छ। मैले अनुसन्धान शुरू गरें, र त्यसो छ कि म स्टेन्याबलिक भर मा आयो। मैले आदेश दिएँ र म प्रति दिन 30mg लिइरहेको छु। वजन कटौती ढिलो हुन्छ, तर जबसम्म म वजन गुमाउँछु, यो सबै राम्रो छ।
8. वास्तविक SR9009 बल्क अनलाइन पाउनुहोस्
SARMs र अन्य समान पूरकहरूको लागी पूरक उद्योगले नकलीहरूसँग छिटो छ। अनुसन्धान रासायनिक कम्पनीहरूले धेरै वर्षसम्म SARM SR9009 बेचेका छन्। केहि एसएक्सएक्सएक्सएक्सएक्स अनलाइन बिक्री को लागि स्टेरियोड्स र प्रतिबन्धित हार्मोन जस्तै प्रोहोर्मोन र क्लेब्यूटरोल।
तपाईंले SR9009 किन्नु भन्दा पहिले, तपाईंले के खरिद गर्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई किन खरिद गर्नुहुन्छ भन्ने बारे सावधान रहनु महत्त्वपूर्ण छ। सौभाग्य देखि, तपाई अझै पनि सक्नु हुन्छ SR9009 पाउडर थोक विश्वसनीय वेबसाइटहरूबाट अनलाइन। Phcoker.com वैध SR9009 लाई प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु मा बेचछन। कृपया उनीहरूको वेबसाइटलाई थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस् आज तपाई कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।